May 7, 2021 - Channel Lover
ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ)
May 7, 2021 by Channel Lover
ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ) ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ) 1 ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ)2ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ)3ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ)4ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ)5ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ)6ယနေ့ မိတ္ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝင်ရှို့ (ရုပ်သံ)7unicode ယနေ့ မိတ်ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝငျရှို့ (ရုပျသံ) ယနေ့ မိတ်ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝငျရှို့ (ရုပျသံ) 1 ယနေ့ မိတ်ထိလာပညာရေးမှူးရုံးကို မီးဝငျရှို့ … Read more
မိုဘိုင်းအင်တာနက် ရှယ်လိုင်းကောင်းဖို့ 5G VPN APK (၆) မျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…။
မိုဘိုင်းအင်တာနက် ရှယ်လိုင်းကောင်းဖို့ 5G VPN APK (၆) မျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…။ အင်တာနက်လိုင်းတွေကို ပိတ်နေတဲ့အတွက် ဂျပန်ဆီကနေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ 5G VPN အကောင်းဆုံး အင်တာနက် APK (၆)မျိုးကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ကဆိုရင် 4G / 3G/ 2G လောက်ပဲ သုံးနေရတာဖြစ်ပြီး အခုတော့ မိတ်ဆွေတို့ အတွက် အရာရာအားလုံးအဆင်ပြေစေမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ 5G အင်တာနက် သုံးနေတာ ကြာပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ လိုင်းဆွဲအားကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက် အဝသုံးနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခု လုပ်ပြထားတာမို့ မိတ်ဆွေတို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ apk အား အောက်က Link … Read more
၅လပိုင်း ငွေဝင်လာစေရန် ကံမြင့်စေရန် ကုသိုလ်ပြုယတြာ
၅လပိုင်း ငွေဝင်လာစေရန် ကံမြင့်စေရန် ကုသိုလ်ပြုယတြာ ၆.၅.၂၀၂၁ ကနေ ၁၅.၅.၂၀၂၁ အထိ ၁၀ရက်စာ အစွမ်းထက် ကုသိုလ်ရေးယတြာ မြတ်စွာဘုရားကို နေ့စဉ် ကပ်လှုရသော အကျိုးဟာစိတ်အေးချမ်းသာပြီး ကုသိုလ်များရရှိစေပြီး စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ် အစစအရာရာ အဆင်ပြေကြပါစေ 🙏🙏🙏 ​ (၇)ရက်သားသမီးအားလုံး ကုသိုလ်ပြုလို့ရအောင် Share ပေးပါ Share ပြီးမှ ယတြာပြုလုပ်ပါ ပိုပြီးအကျိုးထူးစေပါတယ် 👉၆.၅.၂၀၂၁ ဆွမ်းနှင့်လက်ဖတ်သုတ် ကပ်လှုပါ (၂၄)ပစ္စည်းအကျဉ်း (၂) ခေါက်ရွတ်ပါ 👉၇.၅.၂၀၂၁ ဆွမ်းနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးသုတ် ကပ်လှုပါ (၂၄)ပစ္စည်းအကျဉ်း (၄) ခေါက်ရွတ်ပါ 👉၈.၅.၂၀၂၁ ဆွမ်းနှင့်မြင်းခွာရွတ်သုတ် ကပ်လှုပါ (၂၄)ပစ္စည်းအကျဉ်း (၈)ခေါက်ရွတ်ပါ 👉၉.၅,၂၀၂၁ ဆွမ်းနှင့် ပျောင်းဖူး ဒါမှမဟုတ်ငါးဖယ်သုတ် တစ်ခုခု ကပ်လှုပါ (၂၄)ပစ္စည်းအကျဉ်း (၁၀) ခေါက်ရွတ်ပါ … Read more
ဘယျနှဈကွိမျပဲ ပွနျဖတျဖတျ ရိုးမသှားနိုငျတဲ့ “အိမျရိုကျသံ”….
ဟိုတုန်းက အင်မတန်မှ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ သူ့အဖေက ကောင်လေးကို အိမ်ရိုက်သံတစ်ထုပ် ပေးလိုက်ပြီး ပြောပါတော့တယ်။ မင်းတစ်ခါ စိတ်တိုတိုင်း သံတစ်ချောင်းကိုနောက်ဖေး က ဝင်းထရံတိုင်မှာ သွားရိုက်ချေကွာတဲ့။ အဖေက အဲဒီလိုပြောပြီး သံထုပ်ကိုပေးလိုက်တဲ့ ပထမနေ့မှာ ကောင်လေးဟာ ဝင်းထရံတိုင်မှာ သံပေါင်း ၃၇ ချောင်းရိုက်သွင်း ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့သူစိတ်တိုတိုင်း သံလေးတွေကို ဝင်းထရံမှာ ရိုက်ရင်းရိုက်ရင်း ကောင်လေးဟာ သူ့စိတ်သူ ထိန်းနိုင်လာသတဲ့။ သံရိုက်ချက်တွေဟာလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကျဲလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကောင်လေးဟာ ဝင်းထရံမှာ သံပြေးရိုက်တာထက်စာရင် ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ကိုထိန်းရတာ ပိုလွယ်မှန်း သဘောက်ပေါက်လာတော့တယ်၊ အဆုံးမှာ ကောင်လေးဟာ စိတ်မတိုပဲနေ နိုင်တဲ့နေ့ကို ရောက်လာရော၊ ကောင်လေးက ပြေးပြီး သူ့အဖေကို သတင်း … Read more
ညတဈညရဲ့ အဖွဈအပကျြလေးတဈခုပါ ကြှနျတျော ကုတငျပျေါမှာ မအိပျခငျြသေးပဲ လှဲလိုကျ မိတယျ မိနျးမတှဆေိုတာ ညတဈညရဲ့ အဖွဈအပကျြလေးတဈခုပါ ကြှနျတျော ကုတငျပျေါမှာ မအိပျခငျြသေးပဲ လှဲလိုကျ မိတယျ အသငျ့ အိပျပြျောနရှောတဲ့ ကြှနျတော့ရဲ့ အားနှဲ့နှဲ့ ခဈြဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မကျြနှာလေးကို ကြှနျတျော သခြော ကွညျ့နရေငျးကနေ အတှေး တဈခြို့ ဝငျလာပွီး ကြှနျတော့ဟာ ကြှနျတျော တှေးနမေိတယျ မိနျးကလေးဆိုတာ ဘယျလိုပါလိမျ့ ? ကြှနျတျောနဲ့ မင်ျဂလာ မဆောငျခငျက မိဘအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့အခဈြတှနေဲ့ ထိနျးသိမျးမှု့အောကျမှာနပွေီး ကွီးပွငျးလာခဲ့တယျအခုကြ တဈခကျြထဲ ရုတျတဈရကျမှာပဲ သိတောငျ မသိထားတဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ဘေးမှာ အမိနျ့နာခံရငျးနဲ့ အိပျစကျနရေပွနျတယျကြှနျတော့ကွောငျ့ တဈသကျလုံး အတူနခေဲ့တဲ့ မိဘတှကေို စှနျ့ခှာလာခဲ့ပွနျတယျ ▪ ကြှနျတော့ကို ပငျပငျပနျးပနျး … Read more
ပက်ပက်စက်စက်သီးတဲ့ စီးပွားဖြစ် သဘောင်္သီး စိုက်နည်း
ဓာတုပစ်စညျး၊ ဓာတျမွသွေဇာ မပါဘဲနဲ့ သင်ျဘောသီးတှေ ပကျပကျစကျစကျ သီးတဲ့နညျးကို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ ဒါမြိုးကို လူတိုငျးက မြှဝပေေးမှာ မဟုတျပါဘူး။ Admin က သာ ရုပျခြောပွီး သဘောကောငျးလို့ မြှဝပေေးတာမို့ သိမျးထားကွပါ။ဓာတုပစ်စညျး၊ ဓာတျမွသွေဇာမပါဘဲနဲ့ အသားထူထူ၊အစနေဲ့နဲ ပွှတျခဲနအေောငျသီးစခေငျြရငျါတှလေုပျရမယျ။အစကေို့ တဈရကျနလှေနျးပွီးမှ ပြိုးပငျဖောကျပါ။အဲ့ဒီပြိုးပငျလေး(၇-ရကျ)ပွညျ့တဲ့အခါ ခှဲစိုကျမယျ့နရောကို (၁) တှငျးဝ တဈပေ၊ အနကျတဈပခှေဲတူးပွီး တှငျးထဲကို သဈရှကျခွောကျဖွဈစေ…ကောကျရိုးခွောကျဖွဈစေ ထညျ့ပွီးမီးရှို့ပါ။ နှဈကွိမျပွုလုပျရနျ လိုအပျပါသညျ။ပွာကပြွီးတာနဲ့ တှငျးထဲကို ရအေပွညျ့လောငျးပွီး တဈညထားပါ။ (၂) အပငျစိုကျမယျ့ တှငျးအောကျခွမှော ထုံးမှုနျ့ငါးဆယျသားခနျ့ဖွူးပွီး ထုံးပျေါမှာ မွဆှေေး လကျငါးသဈခနျ့ထညျ့ပါ။ (၃) လ်ဘကျရညျဆိုငျတှမှော စှနျ့ပဈစုပုံထားကွတဲ့ နှပျပွီးသားအခြိုခွောကျ အဖတျတှကေိုယူ နှားခြေးခွောကျနှငျ့ဆတူ ရောသမမှပွေီးတဈနလှေနျးပါ။ပွီးလြှငျတှငျးထဲသို့ တဈထှာခနျ့ထပျဖွညျ့ပါ။ ၎င်းငျးအပျေါမှထပျမံ၍ မွဆှေေးအပွညျ့ ထညျ့လိုကျပွီး … Read more
ကိုသားကြီးရဲ့မွေးနေ့အတွက် ရည်စူးပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း
ပရိသတျကွီးရေ နိုငျငံကြျောမငျးသားကွီး ဒှေးဟာဆိုရငျ ပွညျသူပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို မြားစှာရရှိပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲ မငျးသားတဈလကျဖွဈခဲ့ပါတယျနျော။ယခုဆိုရငျတော့ ပရိသတျတှနေဲ့သူခဈြတဲ့သူတှေ အားလုံးကို ခှဲခှာသှားခဲ့တာ ဆယျစုနှဈတိုငျခဲ့ပါပွီ။သူ့ကို ခဈြကွတဲ့ မိတျဆှမေောငျနှမမြားကတော့ ဒှေးရဲ့ အမှတျတရနေ့ ရကျတိုငျးမှာ ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ အမွဲပွုလုပျပေးခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒှေးရဲ့မှေးနနေဲ့အမှတျတရနရေ့ကျတိုငျးကို မမမေ့လြော့ပဲကောငျးမှုကုသိုလျတှပွေုလုပျပေးနတေဲ့ အထဲမှာ ဇှဲနိုငျဝငျးတဈယောကျလညျး ပါဝငျပါတယျနျော။ ဇှဲနိုငျဝငျးဟာ ဒှေးရဲ့ညီအရငျးလိုခဈြခငျရတဲ့သူ တဈယောကျဖွဈပါတယျနျော။ဒှေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အမှတျတရအကွောငျးအရာလေးတှေ ကိုလညျး ဇှဲနိုငျဝငျးရဲ့ လူမှုကှနျယကျတှငျ အမွဲရေးသားဝမြှေပေးနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနဟေ့ာဆိုရငျ မငျးသားကွီးဒှေးရဲ့အသကျ(၅၅)နှဈပွညျ့မှေးနပေဲ့ဖွဈပါတယျနျော။ဇှဲနိုငျဝငျးက ဒှေးရဲ့မှေးနအေ့ား ရညျစူးပွီး ဘုရားတှငျ ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ ပွုလုပျပေးခဲ့တာကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာတငျပွထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ဇှဲနိုငျဝငျးက”ဒီနေ့ ကြှနျတေျာ့ ကြေးဇူးရှငျ ဆရာသမား ကိုသားကွီး (ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ အကယျဒမီဒှေး)ရဲ့(၅၅)နှဈပွညျ့ မှေးနဖွေ့ဈပါတယျ။HAPPY BIRTHDAY ပါအဈကို အဈကို့အတှကျရညျစူးပွီး ကြှနျတျော ဒီမနကျ ရှတေိဂုံစတေီတျော … Read more
ဘဏ်တွေ ပြိုလဲနိုင်သလား (အပြည့်စုံကိုအောက်မှာဖတ်ရန်)
ဘဏ်တွေပြိုလဲနိုင်သလား……တောမီးလောင်တဲ့အခါ တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်ကြပါတယ်.. ခုလည်း ဘဏ်ကနေ ငွေအလွယ်တကူထုတ်လို့မရတဲ့ ပြဿနာအတွက် အကျိုးဆောင်တွေ ပေါ်နေပါတယ်။ အကျိုးဆောင်တွေရဲ့ ဘဏ်ထဲကို ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းထဲက ဘဏ်အပလီကေးရှင်းကနေ ငွေလွှဲပေးရင် သူတို့က ငွေသား လက်ငင်းပြန်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု ငွေပိုပေးရတယ်။ ဥပမာ ငွေသားတစ်သိန်းလိုချင်ရင် သူတို့ရဲ့ ဘဏ်ထဲကို တစ်သိန်းနဲ့ သုံးထောင်လွှဲပေးရတယ်။ ၃% အကျိုးဆောင်ခ ယူတယ်ပေါ့။ ၁%၊ ၃%၊ ၅%၊ ၇% စသဖြင့် အကျိုးဆောင်ခ အမျိုးမျိုး ယူကြပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကြည်ဖြူလို့ လုပ်ကြတာကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ ငွေကို အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်၊ ဘဏ်တွေကလည်း ပိတ်ထားလို့ ငွေထုတ်မရဘူး၊ ATM မှာလည်း ငွေကုန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးဟာ အသုံးတည့်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့ … Read more
စိုးရိမျစရာ မုနျတိုငျးကွီးတဈခု ဖွဈလာတော့မှာလား
မုတျသုနျချေါလာနိုငျသောမုနျတိုငျးကွီးတဈခု ဖွဈလာတော့မလား မုနျတိုငျးတဈခုရဲ့ဖွဈစဉျအစကို လလေ့ာကွညျ့ရငျလထေုဖိအားကဆြငျးနရေမယျ လထေုမညိမျသကျမှု့တှဖွေဈနရေမယျ ဒီဖွဈစဉျအနအေထားတှကေတော့လကျရှိလထေုလှုပျရှားမှု အနအေထားအရကပ်ပလီပငျလယျ တောငျဘကျမှာ ပွညျ့စုံနပေါပွီ ဒါဆိုရငျ လဖေိအားနညျးရပျဝနျးဖွဈဖို့မလေ ပထမအပတျလောကျမှာ ဖွဈလာနိုငျခွရှေိလာနိုငျတယျ။ နောကျကလြှနျးရငျ နှဈရကျပေါ့။‌အဓိကက လဖေိအားနညျးရပျဝနျးစဖွဈလာရငျတော့ မုနျတိုငျးဖွဈဖို့ သခြောပါပွီး။ ဒီမုနျတိုငျးက- ဧရာဝတီမွဈဝကြှနျးပျေါဒသေ- ရနျကုနျတိုငျး- မှနျပွညျနယျတို့ အတှကျ စိုးရိမျစရာတော့ဖွဈလာနိုငျတယျ အဓိကကတော့ မွဈဝကြှနျးပျေါဒသေပေါ့။ မုနျတိုငျးဖွဈလာရငျတော့အနောကျတောငျမုတျသုနျကိုလညျးချေါလာနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးဘုတျပွငျးဘကျမှာ စောစောဝငျလာနိုငျတယျ။ မုနျတိုငျး ဖွဈလာရငျလညျးဆိုငျကလုနျအဆငျ့ထိဖွဈလာနိုငျတယျ။ဒါကွောငျ့ ကွိုတငျပွငျဆငျမှု လုပျဆောငျနိုငျရနျနှငျ့ကွိုတငျသိရှိနိုငျအောငျ မုနျတိုငျးတဈခုဖွဈလာနိုငျခွကေိုကွိုတငျအသိပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီမုနျတိုငျးကဖွဈလာခဲ့ရငျအားအငျကွီးမား ပွငျးထနျနိုငျလို့သတငျးအဆကျမပွတျ သိရှိဖို့‌တော့လိုအပျနိုငျတယျ လထေုလှုပျရှားမှု့တှေ ပွောငျးလညျးမှုတှကေိုခကျြခငျြးတငျပေးနိုငျအောငျလညျးကွိုးစားပေးနပေါတယျ အကုနျသိရှိစဖေို့အတှကျက Like / share ထားပေးကွပါ။သ‌ဘာဝဘေး ဆိုတော့မဖွဈလာခဲ့ရငျအကောငျးဆုံးပါ ဖွဈလာခဲ့ရငျတော့ ကွိုတငျသိရှိကာကှယျထားသဖွငျ့အထိအခိုကျအပကျြအဆီးနဲနိုငျသလိုလူအသအေပြောကျလညျးနဲလာနိုငျလို့ကွိုတငျပွီးအသိပေးထားတာပါ။ ဆကျလကျ စောငျ့ကွညျ့ကွပါစို့။ HtayAung Zawgyi မုတ်သုန်ခေါ်လာနိုင်သောမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မလား မုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်စဉ်အစကို … Read more
NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁ သန်း လှူဒါန်း
NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁ သန်း လှူဒါန်း မကြာမီရက်ပိုင်းက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလုပ်သားများနှင့် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့(အလုပ်သမားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးထိုင်းအခြေစိုက်) AAC အဖွဲ့က ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁)သန်း (ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ခန့်) လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု AAC အဖွဲ့က ယနေ့ မေလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကြေညာထားသည်။ ထိုင်းအခြေစိုက် AAC အမာခံအသင်းအဖွဲ့များ ကော်မတီဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ ညှိနိူင်းဆွေးနွေးပြီး အလှူငွေများကို NUG အစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွက်ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁)သန်းနှင့် NUG အစိုးရအခြားဌာန အသီးသီးသို့လည်း ထိုင်းဘတ်ငွေ(၁)သန်း စုစုပေါင်း ဘတ် (၂)သန်း လှူဒါန်းပေးထားပြီး ဖြစ်သည်။ … Read more